Gool haye Victor Valdes oo Ku Biiray Kooxda Manchester United – Radio Muqdisho
Gool hayihii hore ee kooxda Barcelona Victor Valdes ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay in uu saxiixay heshiis uu ugu biirayo kooxda Manchester United oo uu hogaamiyo macalin Louis van Gaal.
Gool haye Valdes oo 32-jir ah ayaa 18-bilood oo qandaraas ah u saxiixay kooxda ku ciyaarto garoonka Old Trafford,waxana sidoo kale uu sanad kale u sii ciyaari karaa kooxda.
Gool haye Valdes ayaa ilaa bishii October ee sanadkii hore tababar la sameynayay kooxda Manchester United.
Gool haye Valdes ayaa sheegay in ay sharaf u tahay in uu u ciyaaro kooxda caanka ah ee Manchester United.
Tababaraha kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa sheegay in gool haye Valdes uu noqon doono gool hayaha labaad ee kooxda,waxana ka horeeya gool haye David de Gea,halka gool haye Anders Lindegaard uu noqon doono gool hayaha sedaxaad ee kooxda.